ဟန်းဂု - ဝီကီပီးဒီးယား
ကိုရီးယားအက္ခရာကို ဟန်းဂု ဟု ခေါ်ကြသည်။ ကိုရီးယားအက္ခရာကို တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံတွင် ဟန်းဂုဟုခေါ်ကြသော်လည်း မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံတွင်မူ ဂျိုဆွန်းဂု ဟု ခေါ်ကြသည်။ ဟန်းဂုသည် ကိုရီးယားဘာသာ၏ မူရင်းအက္ခရာဖြစ်သည်။ ၎င်းကို ၁၄၄၃ခုနှစ် ဂျိုဆွန်းမင်းဆက်အတောအတွင်း တီထွင်ခဲ့ကြပြီး ယခုအချိန်တွင် တောင်ကိုရီးယားနှင့် မြောက်ကိုရီးယားနှစ်နိုင်ငံလုံး၏ တရားဝင်အက္ခရာအဖြစ်အသုံးပြုလျက်ရှိပြီး တရုတ်နိုင်ငံ ဂျင်းလင်းပြည်နယ်၏ ယန်ဘီယမ်ကိုရီးယား ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ၏ ရုံးသုံးစာအဖြစ်လည်း သတ်မှတ်ထားသည်။
ဟန်းဂုတွင် သရနှင့် ဗျည်းအက္ခရာ ၂၄လုံး ရှိသည်။ ကိုရီးယားစာကို အတုံးအဝိုင်းများဖြင့် အုပ်စုဖွဲ့ရေးသားရသည်။ ဥပမာ 한 (han)။ ထို 한 (han) ဟူသော စာလုံးတွင် ဝဏ္ဏသံတစ်သံသာ အသံထွက်ရသဖြင့် အက္ခရာတစ်လုံးတည်းနှင့် တူသော်လည်း အမှန်စင်စစ်အားဖြင့် ထိုစာလုံးတွင် ㅎ(h) ၊ ㅏ (a) နှင့် ㄴ (n) ဟူသော အက္ခရာသုံးလုံးဖြင့် ပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းထားခြင်း ဖြစ်သည်။ ထိုအတုံးအဝိုင်းများသည် အလျားလိုက်ဖြင့် ဘယ်ဘက်မှ ညာဘက် သို့မဟုတ် ဒေါင်လိုက်ဖြင့် အထက်မှ အောက်သို့ စီ၍ ရေးသားရသည်။
၁.၁ တရားဝင် နာမည်များ
တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံတွင် ၁၉၁၂ခုနှစ်၌ ဂျူ ရှီဂျောင်သည် ဟန်းဂု (한글) ဟူသော ဝေါဟာရကို တီထွင်ခဲ့သည်။ ဟန် (한) ဟူသောစာလုံး၏ အဓိပ္ပာယ်သည် "ကြီးမြတ်သော" ဖြစ်ပြီး ဂု (글) သည် "ကိုရီးယားမူရင်းအက္ခရာ"ကို ဆိုလိုသည်။ ထို့ကြောင့် ဟန်းဂု (한글) ဟူသောစာလုံးသည် "မြင့်မြတ်သော အက္ခရာ" ဟု အဓိပ္ပာယ်ရသည်။
မြောက်ကိုရီးယားများသည် ကိုရီးယားအက္ခရာကို ကိုရီးယားအမည်ကွဲပြားမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ဂျိုဆွန်းဂုဟုခေါ်ခြင်းကို ပို၍ နှစ်သက်ကြသည်။
ဂျိုဆွန်းမင်းဆက်၏ လေးယောက်မြောက်ဖြစ်သော ဘုရင် မဟာဆယ်ဂျုံးသည် ဟန်းဂုအက္ခရာကို ပြဋ္ဌာန်းခဲ့သည်။ ဟန်းဂုအက္ခရာ၏ မူလရင်းမြစ်သည် အလယ်အာရှ၏ အက္ခရာများ၏ အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်ကို တွေ့ရှိရသည်။
Chang၊ Suk-jin (1996)။ "Scripts and Sounds"။ Korean။ Philadelphia: John Benjamins Publishing Company။ ISBN 1-55619-728-4။ (Volume4of the London Oriental and African Language Library).
Hannas, William C (1997)။ Asia's Orthographic Dilemma။ University of Hawaii Press။ ISBN 0-8248-1892-X။
Young-Key၊ Kim-Renaud, ed. (1997)။ The Korean Alphabet: Its History and Structure။ University of Hawai`i Press။ ISBN 978-0-8248-1723-7။ CS1 maint: ref=harv (link)
Lee၊ Iksop; Ramsey၊ Samuel Robert (2000)။ The Korean Language။ SUNY Press။ ISBN 978-0-7914-9130-0။ CS1 maint: ref=harv (link)
Hangeul Matchumbeop။ The Ministry of Education of South Korea (1988)။
Sampson၊ Geoffrey (1990)။ Writing Systems။ Stanford University Press။ ISBN 978-0-8047-1756-4။
Sohn၊ Ho-Min (2001)။ The Korean Language။ Cambridge Language Surveys။ Cambridge University Press။ ISBN 978-0-521-36943-5။
Song၊ Jae Jung (2005)။ The Korean Language: Structure, Use and Context။ Routledge။ ISBN 978-0-203-39082-5။
Korean alphabet learning exercises Archived 29 May 2014 at the Wayback Machine.
Hangul table with Audio Slideshow Archived 27 August 2009 at the Wayback Machine.
↑ Tale of Hong Gildong။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဟန်းဂု&oldid=702937" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၆ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၄:၁၇ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။